Ma ogtahay, Iska Hubi, yaan lagu gaadin Soomaaliyey!!!. - Latest News Updates
Golaha Amaanka ee Jamciyadda Quruumaha ( JQ) waxaa uu ka koobmaa 5 ta xubnood ee joogtada ah ( USA, Uk, China, Ruushka iyo France) iyo 10 xubnood oo labadii Sannaba mar la doorto.
K/ Afrika ayaa maanta ka mid noqotay Golaha, xilkana sii heyndoonta labada sanno ee 2019-2020, waana Mrkii 3aad ee loo doorto tan iyo 1994, waxa ey bedeshay Dowladda Ethiopia oo xubin soo aheyd 2 sanno. Waana halka lagu gaaro go’aamada la xiriira Nabadgalyada, Xuquuqul Insaanka iyo guud ahaan go’aamada siyaasadeed ee Caalamiga ah. Igaarkoodii Mr. Haysona waan ceyrinay oo xattaa haddii la bedelo go’aanadii uu gaaray ey sii socon doonaan.
waxaa ii timid gabar soomaliya oo aad u da’ yar oo howl kar ah, Safaardana si mutadawacnimo ah u caawiso, fir fircooni iyo Dal jaceylna uu ka muuqdo, “Haboonaan leheeyda in Xilalka diplomaasiyadda Haween somaliya oo loo tababaray loo badiyo. Gudaha waxaan ku balansaneeyn Qunsulka somaalida, Safiirku Muddaba waa iska maqnaa. Caadiyan UN- waxaa loo dirtaa Ergo ka kooban dhowr qof oo Khibrado kala duwn leh, Laakin Somalidu sidaa ma yeelin.